TIBBANA: Reeffa laga Takkazeetti argaman ilaalchisuun Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee gaafattee turte – AMBO TV
Reeffi 30’tti siqu baatii tokko dura laga Takkazee keessatti argamuu isaa hordofee Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa Kaartumitti argamu waamtee gaafachuun ishee himame.
Sudaan ambaasaadar Itoophiyaa waamtee yeroo dubbistetti reeffi namoota 29 laga Takkazee keessatti argamee kan dhalattoota Tigraay ta’uu isaa ambaasaaddarichaaf ibsuu ishee Reuters ministeera dhimma alaa Sudaan eeruun gabaaseera.
Torbanootaan dura reeffi namoota rasaasaan dhahamaniifi harki isaanii duubatti hidhamee laga Takkazee gara Sudaanitti yaa’u keessatti argamuun isaa gabaafamuun isaa ni yaadatama.
Yeroo sanatti poolisiin biyyattii laga Sudaan keessatti Setiit, Itoophiyaa keessatti ammoo Takkazee jedhamuun waamamu keessaaa reeffi namoota 28 ba’uu isaa beeksisee ture.
Ibsi ministeera dhimma alaatiin bahe akka agarsiisutti, reeffi namootaa gama Sudaaniin laga bishaanii keessatti kan argame A L I Adoolessa 26 fi Hagayya 27 2013 gidduutti ta’uu isaa ambaasaaddarichaaf ibsi kennameera.
Ibsi ministeera dhimma alaa namoonni reeffi isaanii argame kun haala akkamiin akka lubbuun isaanii darbe wanta jedhe hin qabu.
Ambaasaadarichi waamamanii akka waa’ee dhimmichaa beekan kan taasifaman A L I Hagayya 24, 2013 ta’uun isaa beekameera.
Ibsi ministeera dhimma alaa Sudaan reeffi namoota kanaa kan adda baafame Itoophiyaanota Sudaan Bahaa bakka Waad al-Hulaawaa jedhamu jiraataniin jedheera.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti ifatti wanta jedhe jiraachuu baatus, reeffi namootaa osoo laga Takkazee keessatti hin argamiin dura ‘ololli gadhiifamu jira’ jechuun dursee himatee ture.
Qaamni odeeffannoo haala yeroo qulqulleeffate fuula tiwiitara isaarratti, “warreen olola TPLF afarsan suuraawwan sobaafi fakkiiwwan tottolfaman fayyadamuun duula sobaa ‘dhumaatii Humaraa’ irra deebiyanii kaasuurratti argamu,” jechuun barreessee ture.
Humaraan bakka lagni Takkazee keessa qaxxaamuru Kaaba-lixa Itoophiyaatti argamtudha.
TPLF fi mootummaa Federaalaa gidduutti ji’a kudhan dura lolli jalqabamuu hordofee, namoonni kuma hedduutti lakkaa’aman gara Sudaanitt baqachuun isaanii ni yaadatama.
Mootummaan hidhattoonni daangaa Sudaanitti ce’an Sudaanirraa gara naannoo Benishaangul Gumuziifi naannoo Amaaraa seenuun TPLF waliin hiriiranii waraanaa jiru jechuun ibsa Wixata baaseen himee ture.
Kana hordofee, dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensiin Dhimma Baqqattootaa (UNHCR) lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa kaampii Sudaan keessatti argamuu hir’atus baqattoonni kunneen eessa akka jiran garuu hin beeku jedheera.
Hariiroo Itoophiyaafi Sudaan
Itoophiyaafi Sudaan daangaa naaf mala jedhaniifi sababa ijaarsa Hidha Haaromsaatiin muddamni gidduusaanii jiru dabalaa dhufeera.
Itoophiyaan lolli Tigraay jalqabuu isaa hordofee loltootashee Alfashagaa turan erga kaasteen booda Sudaan bakka daangaa sana to’attee jirti.
Mootummaan Itoophiyaa Sudaan lafa to’attee jirtu akka gadi dhiistee baatuuf gaafataa turtullee, aanga’oonni ol-aanoo Sudaan garuu lafti qabatan sun kan Sudaan ta’uu ibsuun gadi dhiisanii akka hin baane irra deddeebiin dubbataniiru.
Torbanoota muraasa duras gaggeessitoonni Sudaan bu’uuraaleen misoomaa naannoo Alfaashagaatti ijaaran eebbisiisanii turan
Gama biraan ammoo, guyyoota sadiin dura Itoophiyaan humnoonni TPLF’f bitaman ijaarsa Hidha Haaromsaa gufachiisuudhaaf Sudaan keessaan lo’anii seenuuf yaalan barbadeesseera jechuun ishee ni yaadatama.
Qondaala Ol-aanaa humna ittisaa biyyaa kan ta’an Koloneel Sayifee Ingii, humni karaa Sudaan gara Itoophiyaa seene jedhame ijaarsa Hidhaa kanaa gufachiisuudhaaf haleellaa qaqqabsiisuuf akka ture himan.
Gareen jedhame kun fanjii farra namaafi konkolaataa kiyyeessuuf yaalee ture jechuu isaanii humni ittisaa biyyaa beeksisee ture. Sudaan garuu hidhattoota TPLF hin deeggarre jechuun waakkachuun ni yaadatama.
Previous PostOLA OPERATION UPDATES #SEPT 3rd-9th
Next Postትውስታ፦ መስከረም 11/ 1994 ዓ.ም. (ሴፕቴምበር 11 / 2001 ዓ.ም.) በዓለም የንግድ ማዕከል ሕንፃዎች ላይ የተፈፀመ ጥቃት